Halyeeyga saacadda xidigiska Prague | Wararka Safarka
Lola curiel | 25/06/2021 13:19 | La cusbooneysiiyay 25/06/2021 13:20 | dhaqanka, Prague
Prague waa caasimada Czech Republic iyo quruxdeeda, jawigeeda sixirka iyo hiddaha dhaqankeeda ugama tageyso dalxiis aan dan ka lahayn. Haddii aad qorsheyneyso inaad dhaqso u tagto, isku day inaad wax badan ama ka yar ka caddeyso safarka aad raaci doonto, maxaa yeelay dalabku waa mid aad u ballaaran oo ay tahay inaad abaabusho fiican in la arko sida ugu macquulsan, xaqiiqda, Waxaan kugula talinayaa inaad la tashato qaar ka mid ah hagayaasheena maxaa lagu arkaa prague, si aad u ogaato qodobbada muhiimka u ah booqashadaada. Liiskaas, shaki la’aan, waa lagu dari lahaa saacadda xiddigiska magaalada, mid ka mid ah alaabteeda ugu wakiilka badan. Qoraalkan waxaan kusoo bandhigi doonaa halyeeyga ku gadaaman shaqadan cajiibka ah ee farshaxanka.
1 Saacadda Xidigiska ee Prague
1.1 Tirada saacadaha Prague
2 Halyeeyga Prague Clock
Saacadda Xidigiska ee Prague
Saacadda Xidigiska ee Prague waa mid ka mid ah khasnadaha ugu qaalisan ka yimid Czech Republic. Waxay ahayd waxaa la dhisay 1410 waayo hanuuniye sare Hanus, heerkeeda farsamo iyo quruxdeeda aan caadiga ahayn ayaa ka yaabisay bulshadii waagaas jirtay isla markaana ka dhigay adduunka oo dhan. Shahaadadan, marka lagu daro sheegista waqtiga, cabbiraan wejiyada dayaxa, wuxuu leeyahay jadwal aad u saxan waana lagu sharraxay tirooyin firfircoon dhaqaaqa mar kasta oo saacaddu saacaddo garaacdo.
Tirada saacadaha Prague
Markay saacaddu saacadaha garaacdo, dalxiisayaasha ayaa isugu soo urura hortiisa si aad ugu bogaadiso bandhigga. Daaqadaha kore ee saacadda ayaa furan iyo tirooyinka laba iyo tobanka rasuul parade iyaga oo u jajaban sida iyaga oo leh nolol iyaga u gaar ah.
hay afar tirooyin dheeri ah kuwaas oo ka dambeeya 1945. Kuwani sidoo kale waxay ku biiraan dhaqdhaqaaqa, mid kastaa wuxuu matalaa maldahan:
La Muerte, oo uu metelay qalfoof Wuxuu soo jiidayaa xarig calaamadeeyay bilowga safarka wuxuuna leeyahay saacad u taagan waqtiga aan heysano ilaa xisaabinta.
Amiir turki ah, oo ay weheliso lute, damac matalaya.
Ganacsade yuhuud ah taas oo ka dhigan damac. Wuxuu haystaa kiish lacag ah oo uu ruxo marka saacaddu saacadda garaacdo.
Wax aan waxba tarayn, waxaa matalaya nin muraayadda wax ka fiirinaya.
Xiisaha kale waa taas tirooyinkan oo dhami waxay samaynayaan isku dhaqdhaqaaq madaxa ah, dhammaantood marka laga reebo Dhimashada. Sida amiirka Turkiga, ganacsadaha Yuhuudda, iyo ninka aan macnaha lahayn madaxa u ruxayaan, ayay geeridu madaxa isku shareertay, iyadoo sheegaysa inay iyada leedahay eraygii ugu dambeeyay iyo in, xitaa haddii ay diidaan, waqtigoodii dhammaaday.
Halyeeyga Prague Clock
Qaska ka dhashay saacadda waqtigaas ayaa muwaadiniinta reer Prague ku faani jiray, iyo xitaa waxaa jiray kuwa soo safray kumanaan kiilomitir si ay u soo booqdaan muxuu ahaa qayb dunida u gaar ah.
Sida laga soo xigtay halyeeyga, aristocrat, oo aad ula dhacay awoodaha Hanus, waxay bixiyeen lacag aad u tiro badan si loo sameeyo saacad isku mid ah isaga oo jooga magaalo Jarmal ah. Xildhibaanada Prague waxay arkeen maqaamka ay magaaladu ku guuleysatay lahaanshaha gabal noocan oo kale ah iyo waxay isku dayeen inay ka dhaadhiciyaan inuusan aqbalin dalabka. Laakiin macallinku ma uusan siin gacantiisa si ay u maroojiso oo, hal habeen, isagoo ka shaqeynaya aqoon isweydaarsigiisa, saddex nin baa galay, Waxay ku jiideen meeshii dabka lagu shiday iyo, si looga ilaaliyo inuu saacadda soo celiyo, Waxay indhaha ku gubeen bir gubanaysa.
Xanus xaaladdeeda jidheed iyo maskaxeedba marba marka ka dambaysa way kasii daraysay, cidna kama tuhmin cidda mas'uul ka noqon karta weerarka. Deriska iyo xildhibaanada laftoodu waxay u yimaadeen si kalsooni leh si ay u arkaan isaga oo, maalin maalmaha ka mid ah, booqashooyinkaas mid ka mid ah, tababarkiisa Jakub Cech, wuxuu maqlay sida hoggaamiyeyaashu u qirteen inuu ahaa maskaxdii weerarka.
Macallinkii oo xanaaqsan oo xanaaqsan ayaa qorsheeyay qorshe inuu saacadda curyaamiyo kana aarsado wixii lagu sameeyay. Wuxuu weydiistay xildhibaanada inay u fasaxaan inay saacadda aadaan, isagoo ku andacoonaya inuu doonayo inuu maqlo mashiinkiisa hal jeer oo kale inta uusan dhiman. Ugu dambeyntiina, way aqbaleen. Maalintaas, Hanus iyo tababarte waxay soo booqdeen saacadda iyo sayidki ayaa gacanta saaray mashiinka dhexdiisa, goynta iyo sidaasna ku burburinaya farsamooyinka isku dhafan inuu isagu isagu abuuray.
Hanus habeenkaa wuu dhintay waxayna ahayd waqti dheer ilaa ay awoodeen inay saacadda hagaajiyaan. Sida laga soo xigtay halyeeyga, tan iyo dhimashadii sayidka, saacaddu waa inkaaran tahay oo nasiibka Prague wuxuu kuxiranyahay shaqadiisa saxda ah. Haddii saacaddu shaqadeeda istaagto, nasiib xumo ayaa magaalada imaan lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Prague » Halyeeyga Prague Astronomical Clock
10ka dhaqan ee ugu yaabka badan aduunka